कोलेस्ट्रोल देखि कब्जियतको औषधी सरह, जान्नुहोस हरियो मकैका ८ फाइदा !
काठमाडौं- मकै स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ । यसमा धेरैथरी मिनरल पाइन्छन् र तिनले शरीरलाई पौष्टिक आहार दिन्छन् । बजारमा पाइने फूलमकै वा पपकर्न खान स्वादिलो पनि हुन्छ । तर घरैमा मकै उमालेर खाजाका रूपमा वा तरकारीसँग खान सकिन्छ । तौल घटाउन पनि मकै उपयोगी हुन्छ । आउनुस् जानौं यसका फाइदा :
पाल्पामा झाडापखालाबाट ९२ बिरामी
मानसिक तनाव हुँदा वा शारीरिक परिश्रम गर्दा छातीको बीच भागमा दुख्यो ? हाेसियार हुनुस्
यी खानेकुरालाई काँचै खाएको राम्रो